Fikambanana ANEFFA Mitaky ny hiverenan’ny rafi-pampianarana teo aloha
Manoloana ny resaka mandeha eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena mikasika ny tetiandrom-pampianarana 2019 – 2020 dia nanambara tetsy amin’ny EPP
Antanimbarinandriana omaly ny avy eo anivon’ny fikambanan’ny mpampianatra ANEFFA fa mba ho an’ny tombontsoan’ny fanabeazana malagasy dia aleo ny tetiandro teo aloha ihany no averina hampiharina. Izany hoe oktobra hatramin’ny jolay. Rehefa niainana ity taom-pianarana madiva hifarana ity dia maro ny lesoka tsapa tao anatiny. Ny fiitaran’ny taom-pianarana lava loatra, ohatra, dia nisy fiantraikany ara-psikolojika tamin’ireo mpianatra, hoy ny filoha lefitry ny fikambanana, Heritiana Rajaonasivony. Nivahavaha ny fifantohan’ireo mpianatra nanomboka taty amin’ny volana jolay. Na ireo hiatrika fanadinam-panjakana aza hita ho nikatso. Ny mpampianatra koa, noho ny taom-pianarana lava loatra dia lasa somary nisy fikorontanana teo amin’ny fandrindrana ny fandaharam-pianarana, hoy hatrany ny fanazavana.